5% ပွင့်လင်းမှုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ် ၅% ပွင့်လင်းမြင်သာသောစက်ရုံ
နေကာမျက်မှန် Zebra အထည်
Polyester roller မျက်မမြင်ထည်
ဖန်မျှင်ထည် roller မျက်မမြင်ထည်
အိမ်အလှဆင် Verman မျက်မမြင်ထည် Semi-blackout
အသစ်ဒီဇိုင်းလက်ကားရောင်းသူ၏တိပ်ခွေ Shangri-La မျက်မမြင် F ...
အိမ်အပြင်ဘက်အလှဆင် Horizontal Shangri-La မျက်မမြင်ထည် Semi-B ...
Triple Shade Shangri-La Roller သည်အ ၀ တ်အထည်များ ...
ရုံးခန်းသုံးအိမ်အလှဆင် Dual Rainbow မျက်မမြင်ထည်
ရုံးခန်း ၀ င်းဒိုးအတွက် China Decor သီးသန့် Zebra မျက်မမြင်ထည် ...
ရောင်စုံနှစ်လွှာအလွှာမျက်မမြင်ထည် 100% Polyester
သက်တန့် Roller ကမျက်မမြင်နေ့ - ည - Zebra ကုလားကာအရိပ်များ ...
Blackout Zebra Day နှင့် Night Rainbow Duo Bl ...
China Roller မျက်မမြင်များနေ့နှင့်ညအရိပ်အပိုင်း Com ...
China ရုံးသုံးဘေးမျက်နှာပြင် Custom Sunscreen Zebra Auto ...
China Machine ပြည်မ Faux Linen Zebra နှစ်ရက်ကြာနှင့် ...
China Windows Shade Polyester နေရောင်ကာလိပ်ပြား ...
Shutter Window နေကာမျက်မှန်ကာရံထားသည့် Spring Roller Bli ...
China Windows Sun Shade Polyester လှိမ့်မော်တာ ...
အပြင်ဘက်လက်စွဲ Window Shutter Half Shade Dual Layer ...
China မှ Blinds Facto မှထုတ်လုပ်သည့်နေကာမျက်နှာပြင်ကိုထုတ်လုပ်သည်။
လေ့လာမှုနေရောင်ခြည်စစ်ထုတ်ခြင်းစီးပွားဖြစ်နေကာမျက်နှာပြင် Roller ...
စိတ်ကြိုက်အကျယ် China Windows Decoration Curtain Co ...
တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ Sunscreen Roller မျက်မမြင်အထည်အလိပ် ...
R ကိုလက်ကားဖြန့်ဖြူးသည့် Anti-UV Fiberglass Sunscreen Fabrics ...
အခမဲ့နမူနာ Semi Blackout Roller မျက်မမြင်ထည်
Eco-Friendly ကြိတ်စက်အထည်အလိပ် Polyester Semi Blackout
Sheer Elegance Sun Shade နေကာမျက်မှန်အပြားကာရံထားခြင်းသည် PVC အထည်များ
အခြေခံအားဖြင့်ပုံမှန် mesh မျက်နှာပြင်ထည်မီးပျက်မှုနှုန်းသည် ၈၅% မှ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသို့ရောက်ရှိသည်။ ပွင့်လင်းမှုသည် ၁% -၁၅% နှင့်ကွဲပြားသည်။
လေ့လာပါနေရောင်ခြည်စစ်ထုတ်ခြင်းစီးပွားဖြစ်နေကာမျက်မှန် roller မျက်မမြင် Window Shades ကိုလေ့လာပါ
လေ့လာရန်အတွက် roller blinds ကိုရွေးချယ်ပါ
မျက်မမြင်များရွေးချယ်ရာတွင်လေ့လာမှုရှိအခြားပရိဘောဂများ၏အရောင်၊ အထူးသဖြင့်စာအုပ်ညှပ်အရောင်ကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။ ခေတ်မီပရိဘောဂများသည်ညှိနှိုင်းမှုအတွက်ပိုမိုအရေးကြီးသည်။ မျက်မမြင်အရောင်ရွေးချယ်ရာတွင်ပရိဘောဂအရောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်မည်ဆိုလျှင်။ ပရိဘောဂ၏အရောင်နှင့်ကိုက်ညီပါကလေ့လာမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်နိုင်သည်။
China Blinds Factory မှ Sunscreen အထည်ထုတ်လုပ်ခြင်းသက်သက် Elegance နေကာမျက်မှန်များ
အိမ်အလှဆင်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်အလှဆင်ခြင်းအတွက်အရောင်ကိုစဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်အရောင်တွင်ကြီးမားသောအမှားမရှိသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်များပြားပြီးပျင်းစရာကောင်းလောက်အောင်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပြီးတော့အရောင်အိမ်အလှဆင်ခြင်းသည်အိမ်ကိုအရောင်တောက်စေရုံသာမကမတူညီသောအရောင်အမျိုးမျိုးရှိသောလူတို့၏ခံစားချက်အမျိုးမျိုးကိုပါယူဆောင်ပေးသည်။ ဒီတော့ရောင်စုံအိမ်ကိုဘယ်လိုအလှဆင်မလဲ။ ကြည့်ရှုရန် Groupeve ကိုလိုက်နာပါ!
အပြင်ဘက်လက်စွဲ Window Shutter Half Shade Dual Layer Electric Double Roller Blinds
Groupeve နေရောင်ဒဏ်ခံ zebra ထည်၏လျှောက်လွှာ
၁။ အများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများ (အားကစားရုံ၊ ခမ်းနားသောပြဇာတ်ရုံ၊ လေဆိပ်ဆိပ်ကမ်း၊ ပြခန်း)
ထည်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့် B1 (အောက်ဆီဂျင်အညွှန်း index32) မီးနှင့်မီးလျှံတားဆီးသည့်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပြည့်မီရန်လိုအပ်သည်
၂။ ရုံးအဆောက်အအုံ (ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်း၊ lob ည့်ခန်း)
ယေဘုယျအားဖြင့်အရှေ့နှင့်အနောက်သို့မျက်နှာမူ။ ပွင့်လင်းမှု ၁% မှ ၃% အထိရှိသောအထည်များကိုရွေးချယ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မြောက်ဘက်သို့မျက်နှာမူ။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ၁၀% ရှိသောအထည်များကိုသာရွေးချယ်သည်။ တောင်ဘက်သို့မျက်နှာမူ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပွင့်လင်းမှုရှိသော ၅% နှင့်ပိတ်ထည်ကိုရွေးချယ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံရှိတရုတ်အိမ်သုံးဒီဇိုင်းနေရောင်ခြည်အရိပ်ပြနေတုန်းနေကာမျက်မှန် roller မျက်မမြင်ထည်
လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာခြင်းနှင့်အတူလူများသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ပြတင်းပေါက်အထည်များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များရှိကြသည်။ စားသုံးသူများသည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ China sunscreen roller blind ပိတ်ထည်များ၏အသွင်အပြင်အရည်အသွေးကိုဂရုပြုရုံသာမကအိမ်တွင်းအလှဆင်သည့်အထည်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်, အရိပ်ထည်၏ Multi- အလုပ်လုပ်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိများပို။ ပို။ သိသာဖြစ်လာနေကြသည်။
လက်လီအရောင်းဆိုင်အရောင်းဆိုင်များတွင် ၀ ယ်ယူသူများ၏ရုံး ၀ င်းဒိုးကုလားကာများတပ်ဆင်ထားသော roller blinds shades
လျှပ်စစ် roller blinds ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို
roller shutter တံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များသည်လှပပြီးအသစ်သောပုံသဏ္,ာန်၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ အဆင့်မြင့်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှု၊ ကြမ်းတမ်းမှု၊ ခိုင်မာသောတင်းကျပ်မှု၊ ကောင်းသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ မြေareaရိယာ၏အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း၊ ၎င်းသည်ဗဟိုစွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးမူဝါဒအပေါ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ် roller blinds များသည်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းရည်ကောင်းမွန်ပြီးအအေးကာကွယ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမြင့်မားစေပြီးသင့်အိမ်သုံးရန်အတွက်အလွန်သင့်တော်သည်။
China Windows Shade Polyester Rolling Motor မျက်မမြင်ထည်
လျှပ်စစ် roller ရှပ်တာများတွင်အသုံးပြုသောအထူးပစ္စည်းသည်အိမ်သုံးအတွက်အခြားရိုးရှင်းသောကုလားကာများနှင့်မကိုက်ညီသောခက်ခဲသောအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုခံနိုင်စေသည်။
လျှပ်စစ်ရှပ်တာ ၀ င်းဒိုး၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်အကြမ်းခံ။ ခိုင်ခံ့ပြီးတင်းကျပ်သည်။ ၎င်းသည်သာမန်သူခိုးများအားသင်၏ဘဝနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလမ်းကြောင်းအားလုံးတွင်မထိမခိုက်စေရန်ကာကွယ်ပေးသည်။
Shutter Window Sunscreen ပုံစံနွေ ဦး ကြိတ်စက်မျက်မမြင်ထည်
အိမ်ကိုဖြည့်ဆည်းရန် Windproof blindness များ။
လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်အလင်းရောင်အခြေအနေနှင့်ပြင်ပရှုခင်းများကိုပိုမိုရှာဖွေနေကြသည်။ သို့သော်ဖန်အဆောက်အအုံများ၏တောက်ပသောအသွင်အပြင်အောက်တွင်ပြproblemsနာများစွာရှိသည်။ ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်၊ စွမ်းအင်မြင့်မားစွာသုံးစွဲမှု၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးခြင်းပြည်သူလူထု၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၊ စိမ်းလန်းစိုပြည်မှု၊ ဘေးကင်းရေးနှင့်အခြားရှုထောင့်များဖြင့် ၀ င်ရောက်နိုင်သောကြောင့်လေကာခံနိုင်သော roller ရှပ်တာသည်အိမ်တွင်းဘဝထဲသို့ရောက်ရှိသွားသည်။ ဒါကြောင့် windproof blinder တွေရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲ။
Windproof roller shutter သည်နေရောင်ခြည်အများစုကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ပြီးအခန်းအတွင်းရှိနေရောင်ခြည်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြေခံအားဖြင့်နေရာမယူပါ။
Window Roller Outdoor Sunshades Vinyl Sunscreen မျက်မမြင်ထည်
China Roller မျက်မမြင်များ
လက်ရှိတွင်စျေးကွက်တွင်စမတ်နေရောင်ခြည်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ စားသုံးသူများအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများစွာမှကောင်းသောကုန်ပစ္စည်းများကိုမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းကိုအောက်ပါအချက်များနှင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။
(၁) ကုန်အမှတ်တံဆိပ် - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မြင့်မားသောအသိအမြင်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ပါ။ အရည်အသွေးနှင့်အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအာမခံရမည်။
(၂) လုပ်ဆောင်ချက် - ကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်သည့်အခါသုံးစွဲသူများသည်လက်ရာမြောက်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ရုံသာမကထုတ်ကုန်များ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပါဂရုပြုရမည်။
လိပ္စာ: High-Tech မှ, Jiannan ရိပ်သာလမ်းအမှတ် 1098 အလယ်တန်းအပိုင်း။ ဇုန်, Chengdu, တရုတ်